स्वराज भ्रमणको साइडइफेक्टः ओलीले राजपा र फोरमलाई किन गर्नुभएन वास्ता ? | सहारा टाइम्स
Home » Main-News » स्वराज भ्रमणको साइडइफेक्टः ओलीले राजपा र फोरमलाई किन गर्नुभएन वास्ता ?
स्वराज भ्रमणको साइडइफेक्टः ओलीले राजपा र फोरमलाई किन गर्नुभएन वास्ता ?
SAHARA TIMES Thursday, March 1, 20180No comments
भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराज नेपालको भ्रमण गरि फर्केर गएपनि त्यसका साइड इफेक्ट (प्रभाव) अझै देखिरहेको छ । स्वराज नेपाल आएर ओलीसँग सम्बन्ध रिनु मात्र गरेर जानु भएन ओलीसँग नेपाली राजनीतिकमा विग्रेसका सम्बन्धहरुलाई पनि सुधारेर जानु भयो । जसले गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई झन शक्तिशाली र प्रभावशाली बनाएको छ ।
एमाले र माओवादी केन्द्रको वामगठबन्धनले सरकार गठन गरेपनि संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई वेवास्ता गरिएको छ । प्रधानमन्त्री बन्नुअघि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजपा र फोरम नेपालसँग पटक पटक छलफल गर्नुभएको थियो । तर, सरकार गठनको बेला कुनै उहाँले एकपटक सोध्दा पनि सोधेन । त्यसले गर्दा ती दलका नेताहरुले चित्त पनि दुखाउनु भएको छ ।
सरकार गठनको बेला माअ‍ोवादी केन्द्र र एमालेले आफूहरुसँग छलफल गर्न आउला भनि ती दलका नेताहरु पर्खेर बस्नु भएको थियो । तर, एमालेले माओवादी केन्द्रलाई मात्र साथमा लिएर सरकार निर्माण गर्यो । शुरमा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोसँग सरकार गठनको विषमया पटक पटक छलफल गर्नुभएको थियो । तर, उहाँहरु सविधान संशोधनको अडान लिएपछि एमाले झस्कियो र पछाडी हटेको बताइन्छ ।
त्यही भएर सरकार गठनको समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले ती दलका नेताहरुलाई वास्ता गर्नुभएन । राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्र राय यादवले एमालेसँग आफूहरुको कुराकानी भएको छ तर उसैले वास्ता नगरेपछि पछिपछि जाने कुरा पनि नहुने टिप्पणी गर्नुभयो । सायद हाम्रो आवश्यकता नभएर होला । सरकार गठनको बारेमा हामीसँग छलफल गरेको छैन, उहाँले सहाराटाइम्ससँग भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय सभा चुनावको समयमा नै हामीले प्याकेजमै सहमति गरौं भनेका थियौै ।
र हामीले केही प्रस्ताव पनि राख्यौं । उनीहरुले पार्टीमा छलफल गरेर कुरा गरौंला भने तर हालसम्म छलफल गर्न आएका छैनन् ।’
मधेशवादी दललको मुख्य माग नै सविधान संशोधन हो । त्यसपछि मधेश आन्दोलनको समयमा पक्राउ परेका आन्दोलनकारीको रिहाय, आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लागेकाहरुको मुद्दा फिर्ता लगायतका माग प्रस्तुत गरेको छ । तर, एमाले र माओवादी केन्द्रले त्यसको प्रतिकृया अझै दिएको छैन । एमालेका उपाध्यक्ष भिम रावलले भने, एमाले पार्टी सविधान सांशोधनका विरोधी कहिल्यै थिएन, काँग्रेसले विरोधी देखएको मात्र हो । राष्ट्रलाई असर गर्न सक्ने बाहेक सबै विषयमा संशोधन गर्न एमाले तयार छ ।’
यस्तै धारणा एमालेका मधेशी नेता रघुवीर महासेठको पनि छ । उहाँले एमाले सविधान संशोधन गर्न तयार छ तर मधेशवादी दलले त्यसका लागि तयार नरहेको गुनासो गर्नुभय । हामीसँग कुरै नगर्ने बाहिर बाहिर एमालेले संशोधन हुन दिएन, संशोधन हुन दिइरहेको छैन भन्दै हिडेर सविधान संशोधन हुँदैन, उहाँले भन्नुभयो, बसौं छलफल गरौं, कहाँ कहाँ संशोधन गर्न सकिन्छ, छलफल गरेर त्यसलाई टुग्यांउँ । तर, राष्ट्रको अहित हुने खालको संशोधनमा एमाले तयार हुनेछैन ।’
राजपा नेपाललाई सरकारमा ल्याउनका लागि रघुवीर महासेठले त्यसका दलका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोसँग पटक पटक छलफल गर्नुभएको छ । धनुषामा चुनावमा रघुवीर महासेठबाट सहयोग समेत प्राप्त गर्नुभएका राजेन्द्र महतोले उहाँसँग पटक पटक छलफल गर्नुभयो । सरकारमा जान राजेन्द्र महतो तयार देखिन्छन् तर सरकारले सविधान संशोधनको विषयमा बाटो नखोलेको कारण पछाडी हट्नु भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा चुनावमा एकअर्कालाई सघाएपछि पछिल्लो समय यी दुई नेताको बीचमा राम्रो दोस्ती भएको छ ।
एमालेले राष्ट्रिय सभाको चुनावमा सहकार्य गरौं अरु विषयमा पछि छलफल गरेर टुग्याउँदै गरौंला भन्दा राजपा र फोरम नेपालका नेताहरुले मान्नुभएन । उहाँहरुले सबै कुरा प्याकेजमै सहमति होस् भनि चाहनु भएको थियो ।
फोरम नेपालका सहअध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले एमाले अझै आफूहरुको मागप्रति गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, सविधान संशोधनका लागि त्यत्रो आन्दोलन भयो, एमालेको कारण संशोधन भएन । जगजाहेर छ तर अझै पनि एमाले संशोधनका लागि तयार भएको देखिदैन ।’
एमालेले सरकारको नेतृत्व गरेको छ, अब सानो चित्त राखेर हुँदैन, आदिवासी जनजाति, मधेशी, महिला, दलितको अधिकारको विषयमा आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नु पर्ने बेला आएको उहाँले सुझाउनु भयो ।
सविधान संशोधन आफूहरुको मुख्य माग हो, त्यसका लागि एमालेलाई पटक पटक भनिसकेको तर, उताबाट कुनै प्रतिकृया नआएको उहाँले बताउनुभयो । सविधानको धारा २७४ संशोधन गर्न आवश्यक छ, अहिलेको सविधानमा नयाँ राज्य बनाउन नसक्ने, सीमांकन पनि हेरफेर गर्न नसक्ने व्यवस्था छ । जसलाई हामीले संशोधन गर्न भनिरहेका छौं, उहाँले भन्नुभयो, भारतीय सविधानको धारा–३ मा नयाँ राज्य बनाउन सक्ने, सीमांकन हेरफेर गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ तर नेपालले त्यसमा कन्जुस्याई गरेको छ ।’
आफूहरुको मागको बारेमा एमाले स्पष्ट भए मात्र सरकारको बारेमा सोच्न सक्ने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले आफूहरुलाई सरकारमा जान हतार नरहेको, आफूहरु गएपनि नगएपनि उनीहरुलाई फरक पनि पर्दैन त्यसैले आफूहरुले पनि हतार नगरेको प्रतिकृया दिनुभयो ।
राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य अनिल झाले एमाले नेतृत्वको सरकारमा मधेशवादी दल जानै नहुने बताउनु भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, एमाले शुरुदेखि नै मधेशप्रति सकारात्मक छैन । त्यही दलका कारणले सविधान संशोधन हुन सकेन । यी कुराहरुको स्पष्ट नभएसम्म सरकारमा जाने कुरै हुँदैन । यसका बारेमा पार्टीमा कुनै छलफल पनि छैन । सायद मलाई लाग्छ, यही अवस्थामा राजपा नेपाल ओली नेतृत्वको सरकारमा जाँदैन ।’
मधेशवादी दलको झुकाव लोकतान्त्रिक गठबन्धनतिर छ । उहाँहरुले शुरुदेखि नै वाम गठबन्धन भत्काएर प्रचण्डलाई काँग्रेस र मधेशवादी दलको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनाउने कसरत गरेकै हो । तर, सफल हुन सकेन । राष्ट्रियसभाको चुनावमा पनि राजपा नेपाल र फोरम नेपाल वामगठबन्धनसँग होइन, काँग्रेससँग सहकार्य गरेको थियो ।
जब कि राष्ट्रिसभा चुनावमा वाम गठबन्धनसँग सहकार्य गरेको भए राजपा नेपाल र फोरम नेपालले दुई सीट बढी पाउथ्यो । ‘एक दुई सीट पाउनु महत्वपूर्ण कुरा होइन, राजपा नेपालका महासचिव केशव झाले भन्नुभयो, आज एक दुई सीटको लोभमा वाम गठबन्धनसँग सहकार्य गर्ने, भोली गएर मुद्दामा कुरा मिलेन भने फेरि अर्कोतिर जाने ? त्यसले राम्रो सन्देश जाँदैन्थ्यो त्यही भएर हामी दीर्घकालिन सोचले नै काँग्रेससँग सहकार्य गर्यौं ।’
भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराज माघ १८ गते गरेको नेपाल भ्रमणको क्रममा अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्न मधेशी नेतालाई सुझाव दिनुभएको थियो । तर, नेताहरुले सो सुझाव त्यतिबेलै इन्कार गरेका थिए । उहाँहरुले सविधान संशोधनको विषयमा एमाले स्पष्ट नभएसम्म सहयोग नगर्ने प्रतिकृया दिनु भएको थियो । तर, स्वराजले पनि सविधान संशोधनको बारेमा मधेशवादी दललाई कन्भिन्स गर्न सक्नु भएन । सो क्रममा स्वराजले सविधान संशोधनका लागि तपाईहरुले जस्तो सुकै गर्नुस् तर सरकारमा ओलीलाई सघाउनुस् भनि दवाव नै दिनु भएको थियो ।
पछिल्लो समय राजपा र फोरमको सम्बन्ध काँग्रेससँग पनि बिग्रेको छ । सरकारले नियुक्त गर्ने तीन जना राष्ट्रियसभा सदस्यमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एकलौटी गरेपछि राजपा र फोरम नेपालका नेताहरुले चित्त दुखाएका छन् । अब त्यसको साइड इफेक्टले मधेशवादी दललाई वाम गठबन्धनको नजिक लाग्छ कि टाढै राख्छ, त्यो हेर्न नै बाँकी छ ।